विचार-लेख – सप्तरंगी एफ एम
Home / विचार-लेख
-कुशुम तामाङ “नारि प्रकृतिको समस्त कोमलता र सुन्दरताको प्रतिक हो ”नारिको बारेमा कसैले भनेको यो कुरा सुन्दा हृदय निकै प्रफुल्लीत हुन्छ र यदाकता मनमा म पनि नारि हुँ भन्ने अहम पैदा हुन्छ । धेरे दिन भयो मन स्थिर छैन, वेचैनी धेरै बढेको छ । पछिल्लो समय दिनहुँजसो मेरो समाजमा जुन किसिमका घटना घटीरहेको छ त्यो देख्दा लाग्छ की नारिको ...
९ श्रावण २०७५, बुधवार चौध जना सम्पादक डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेको विषयमा अहिले निकै ठूलो बहस चलेको छ । सामाजिक संजालमा कतिपय व्यक्तिले विषय बुझेर, शालीन भाषामा र कतिपयले गलत भाषामा, गलत आशयमा र विषय वा पृष्ठभूमि पनि नबुझी जथाभावी विरोध गरेका छन् । धेरैले सम्पादकहरूले लिएको कदमको समर्थन पनि गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजमा स्वस्थ बहसको ...
९ श्रावण २०७५, बुधवार काठमाडौं – भाषण गर्ने बेला मिलाएर बोल्न नजान्दा मंगलबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिनुपरेको छ । बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राको विषयमा जथाभावी बोलेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि उहाँ राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको हो । तामाङको अभिव्यक्तिले सरकार र पार्टीलाई नै जोडेर बदनाम गर्ने प्रयास भएकाे भन्दै सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरुले ...
सरला गौतम राती अबेर सम्म निद्रा पर्दैन । अर्बौं जोगाउन लागिपरेको एक मान्छेको आगो जस्तो बोलीले पोल्छ । आफ्नो महत्वकांक्षा पुरा गर्न ऊ जे पनि बोलिरहेछ । सत्याग्रहीलाई र नेपाली छोरीहरूलाई । बिहान उठ्छु। सामाजिक सञ्जाल खोल्न खोज्दिन । मेरा लागि अस्पतालमा भोकै लडेको मानिसको अनुहार आँखाभरि नाच्छ । म जस्तै मान्छेका लागि लडेको मान्छेलाई अवहेलना गर्छ सरकार । आफ्नो ...
आठौँ पटक आमरण अनशनमा बसेका छन्, एउटा क्रान्तिकारी र मानवतावादी चिकित्सक डा. गोविन्द केसी। एक्लै सत्यको लडाइँ लडिरहेका छन्। गरिब नेपाली जनताले एउटा ट्याब्लेट नपाएर ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने अत्यन्त चोखो ध्येयले आफ्नो ज्यान पटक–पटक दाउमा राखिरहेका छन्। जसको व्यक्तिगत नामको कुनै अभीष्ट छैन। जसको जिन्दगीको शब्दकोशमा लालच, लालसा, लिप्सा, लोभजस्ता अश्लील शब्दहरू छैनन्। जुनसुकै दृष्टिकोण, जुनसुकै वाद, जुनसुकै सिद्धान्तले ...
दमक नगरपालीकाले गत बर्षको चैत २९ गते राजपत्रमा प्रकाशीत गरेको शिक्षा नियमावली सुरु देखीनै बिबादित बनेको छ । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली कांग्रेस लगायत शिक्षा संबद्ध व्यक्तिले त्यसको चौतर्पिm बिरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस र शिक्षक महासंघले त नगरपालीका ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नियमावलीको खारेजीका मागनै राखेको थियो । चौतर्पिm बिरोध हुँदा पनि अटेर गरेर नगरपालीकाले नियमावली कार्यान्वयन गर्ने ...
सप्तरङ्गी एफ.एम./दमक/असार १६/ लेखक तथा टिप्पणीकार खगेन्द्र संग्रौलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग तुलना गर्नु भएको छ । उहाँले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको बोलीले तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाको झल्को दिएको भन्नु भएको छ । सरकारले पहिले शान्तिपूर्ण धर्ना र जुलुस हुँदै आएका स्थानमा भेला हुन निषेध गरेपछि व्यंग्यात्मक रुपमा लेखक संग्रौलाले कडा टिप्पणी गर्नु भएको हो । उहाँले यो निषेधाज्ञालाई ...